Ukufuywa Kwezimbuzi Zenyama eNingizimu Afrika
Meat Goat Farming
© Gerrit dos Santos
Izimbuzi zikhiqiza i-fiber, izikhumba kanye nobisi kodwa isizathu esiyinhloko sokugcina izimbuzi ukukhiqizwa kwembuzi yembuzi. Lokhu kwanikela ngezimbuzi zezilwane eziyingxenye enkulu yenani lembuzi yomhlaba.
Inyama yembuzi itholakala ezimpilweni zezimbuzi ze-Boer, izimbuzi zendabuko, kanye nama-Angora asebekhulile nezimpongo ezimbi (ubisi bezimbuzi). I-Chevon nayo itholakala kumazinyane wezinyane lembuzi. Ezinye imikhiqizo yembuzi efana nemikhiqizo yobisi kanye ne-mohair ibhekwa njengemikhiqizo eyisisekelo noma yesibili.
Ukukhwabanisa kwezimbuzi kuthonywa ukubaluleka komnotho wale mikhiqizo - ngamanye amazwi, ubisi obungapheliyo kanye nezimpongo ezindala ze-fiber zihlatshwa inyama.
Ukuhlatshwa kwezimbuzi zendabuko ekusetshenzisweni kwamasiko kwembuzi yezimbuzi yilokho okuyiyona ndlela enkulu embonini yokulima yezimbuzi eNingizimu Afrika, lokhu kufakwa yizimbuzi zeBoer nokutholakala okulinganiselwe (ngezikhathi ezithile) zezimbuzi ezindala ze-Angora.
Iningi lembuzi (ikakhulukazi izimbuzi zendabuko noma izinhlanzi ezingezansi) ezisetshenziselwa inyama yezimbuzi eNingizimu Afrika zihlatshwa ngendlela yendabuko futhi zisetshenziselwe ukusetshenziswa kwamasiko nezenkolo.
UBoerbok SA uncoma ukumaketha kwezimbuzi zenyama phakathi kweminyaka eyi-3 kuya kwezingu-12 ukuze kutholakale isidumbu sokungabi nesisindo esingaphezu kuka-23 kg.
Ngokusho komnyango waseNingizimu Afrika: Imbuzi, amaHlathi kanye namaFisheries (DAFF) izimbuzi zitholakala kulo lonke izwe ne-Eastern Cape (39%), eLimpopo (18%) kanye nezifundazwe zaKwaZulu-Natali (13%) yizona ezikhiqiza kakhulu, zinikeza abangu-70 % yezimbuzi eziphilayo eziphelele ezikhiqizwa eNingizimu Afrika (ucwaningo lwango-2017).
Kulinganiselwa ukuthi phakathi kuka-0.5 kuya kwezingu-5% kuzo zonke izinhlobo zezimbuzi ezihlatshwe e-SA zihamba emadelweni asemthethweni.
Izimbuzi ezisetshenziselwa imakethe 'yenkolo' zithengiswa bukhoma bese zihlatshwa ngokwezifiso. Izimbuzi zihlatshwa ngendlela ethile emishadweni: Ngokusho komkhuba wemindeni, lapho ukudla inyama kunomkhawulo kubantu abathile.
Emidlalweni yokungcwaba, abagulayo bendabuko kufanele bancelise igazi futhi bagqoke i-gallbladder yembuzi njengesihloko sekhanda.
Ngemuva kwemikhosi yokuqalwa kwamadoda, abaqalayo bagubha umkhosi wabo wokuhamba ngezinyama zezinyosi ezigcoziwe kanye nokudla kommbila.
Ngokusho kweKalahari Kid Corporation, ukuhlatshwa kwezimbuzi ngokuhweba ngokuhambisana nezinkambiso zeHalal kanye ne-ISO ezinzima kakhulu futhi kuhlatshelwe ama-abattoir avunyelwe ngaphandle, ZA105 eGroblershoop eNyakatho Kapa. I-abattoir yaseColesberg nayo isetshenziselwa futhi uma kudingeka i-slatoir eDe Aar.